Mandehandeha any amin'ny Fanakafosana Fanatanjahantena Fanasan-damba sy orinasa mpanamboatra | Faye
Mandehandeha amin'ny kitapo Lamesa fitahirizana kilalao ny ankizy
Toeram-pisakafoanana kilalao mavitrika ho an'ny ankizy maoderina sy Stool
Latabatra ankizy an-tsaha avo sy seza napetraka
Mpitsoa-bodirindrina zazakely amin'ny seza tsy mihetsika
Fipetrahana seza amin'ny seza ambony seza amin'ny zaza
Modern lakozia famonoan-jaza maoderina
Ny trano fisakafoanana azo raikitra eo amin'ny sezakelaka lehibe
Hotel Mampiasa Fonja Baby Foldable miaraka amin'ny Big Wheels
Fitaovana zazavavy ho an'ny trano fandriana trano
Ny fenitry ny efi-trano fandriam-bolo ho an'ny zaza ao amin'ny EU
● Anisan'izany ny hidy sy Castors
● Miara-mandeha amin'ny ankizy
● loko / fanontana natao namboarina
● 【3 IN 1】 Mijanona, mandeha, mitaingina; hitazomina foana ireo ankizy kely mandalo amin'ny seranam-piaramanidina, amin'ny toerana halehany sy lavitra ny trano. Ny asa samy hafa dia mahafeno ny fepetra takian'ireo zanakao.
● 【Eo ambanin'ny fitahirizana sy ny fanamafisana】 Ampidiro ny kilalao tianao indrindra na ny fananana manokana manokana ao amin'ny fitoeran-tsolika ao ambanin'ny seza ho an'ireo mandehandeha eny amin'ny manodidina na zoo. Ny fiasa maromaro dia mamela ny ray aman-dreny handraraka ny ankizy vizana amin'ny kitapo mihodina na mora entina eo an-tsorony
● 【Meterial ny sakafo ara-tontolo iainana】 Namboarin'ny PP tsy misy poizina tsy misy poizina izay azo antoka fa hiloman'ny ankizy. Ny fehikibo seza azo zakaina dia miaro ny ankizy tsy ho voaro. Manana tànana fampiononana ihany koa ny tànana.
● 【Kodiarana matevina】 Famoronana kodiarana 4 tsy manam-paharoa no manome ny kofehy mitaingina miampy fahatoniana sy fiarovana. Tsy ilaina ny fitsanganana amin'ny kick na tsy mahay mandanjalanja. Ny kirihitra maoderina sy famolavolana kodiarana 4 dia mahafatifaty sy mora ho an'ny ankizy amin'ny ambaratonga fahaiza-manao rehetra. Midira fotsiny ary manomboka manototra. Ny kodiarana mangina dia mendrika sy milamina. Ny fantsom-bidy avo lenta dia mampihena ny fangovitana ary manao fantsom-pifamoivoizana malefaka kokoa.
● 【Fanomezana tsara】 Fanomezana tsara ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny zanakao, Krismasy! Avelao ny zanakao ho scooter miasa sy milomano tsara! Ho tian'izy ireo ny mitaingina kilalao ho azy ireo. Mety ho an'ny ankizilahy sy ankizivavy hatramin'ny 2-7 taona.
Previous: Fitaovana an-trano sy solofan-jiro amin'ny fanaka sekoly
Manaraka: Mandeha amin'ny zaza
Cartoon Trolley paosy
Ankizy mitambatra entana
Fanaterana Scooter ho an'ny ankizy
Mandeha amin'ny zaza
Mandeha kitapo fitehirizana ankizy